कोल्टहरू: सुपरबोल चैम्प्स! Careerbuilder: हराउनेहरू! | Martech Zone
कोल्टहरू: सुपरबोल चैम्प्स! Careerbuilder: हराउनेहरू!
सोमबार, फेब्रुअरी 5, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अद्यावधिक: म यसमा गलत थिए, माफ गर्नुहोस् Careerbuilder!
सुपरबोबलको बारेमा त्यहाँ धेरै पोष्टहरू छन्। मेरो केवल २ सेन्ट मात्र यो हो कि यो हामीले धेरै बखतमा हेर्‍यौं भन्दा यो अझ राम्रो खेल थियो। मलाई खुशी छ कि कोल्ट जित्यो! वर्ग, गरिमा, र कालो क्रिश्चियन कोचको नेतृत्वमा रहेको एक संगठन। यो सबैलाई एक महान सन्देश हो यो सफल हुन के ले लिन्छ।
सुपरबोबलको अन्य विजेता क्यारबुलिल्डर थियो ... IMO, तिनीहरूसँग उत्तम सुपरबोबल विज्ञापनहरू थिए। यद्यपि यसको नियमित रूपमा देखिएको मुहावरेमा (अखबार) कम्पनीले भाइरल मार्केटि .बाट अप्ट आउट गरेको छ र मानिसहरूलाई उनीहरूको विज्ञापन अन्य साइटहरूमा इम्बेड गर्न दिदैन। तिनीहरूले बस यो प्राप्त गर्दैनन्। Boneheads। भिडियो क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुनेछ मेरो भनाइ के हो।
यसलाई कसले पनि भाइरल हुनबाट रोक्न निर्णय गरे त्यसलाई हटाउनु पर्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लिनुहोस्, तपाईंको शानदार विज्ञापनहरू थप्नुहोस्, र त्यसपछि मानिसहरूलाई साझेदारी र उनीहरूको बारेमा कुरा गर्न नदिनुहोस्। हराउनेहरू।
विज्ञापन यहाँ हेर्नुहोस्:
नमस्कार, म म्याक हुँ। र म पीसी हुँ।
फेब्रुअरी १,, २०११ 5:१:2007 अपराह्न
यदि निगमहरूले वास्तवमै उपभोक्ताहरूलाई खुशी पार्न चाहान्छन्, तिनीहरूले महँगो सुपर बाउल विज्ञापनहरू छोड्नुपर्दछ र त्यसको सट्टामा प्रमुख ग्राहक अधिकारीमा लगानी गर्नुपर्दछ, एकल व्यक्ति जो उनलाई वा उनीहरुलाई ग्राहकहरुमा राख्ने आरोप लगाईन्छ? दिमाग
तर यसको सट्टामा उनीहरू आफ्नो समय र पैसा खर्च गर्दछन् निश्चित गर्न कि उनीहरूको विज्ञापन हास्यास्पद र मनोरन्जनकारी छ, जसको मतलब यो हुँदैन कि यसले अधिक उत्पादनहरू बेच्छ। एक राम्रो मार्केटरले कसरी र किन विशेष उत्पादन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ विचारहरू दिएर उपभोक्ताहरूलाई चकित बनाउँछ। विशिष्ट व्यक्तिको द्वारा विकसित विज्ञापनहरू वा प्रसिद्ध सेलिब्रेटीहरू तारांकित प्रसिद्ध हाँस्न सक्दछन्, तर बिक्री उत्पादन गर्न असम्भव छ। प्रत्येक डलरको लागि तपाइँले खर्च गर्नु भएको छ तपाइँ एक डलर फिर्ता देख्नुपर्नेछ र म साँच्चिकै शंका गर्छु कि यी कम्पनीहरूले यी सुपर बाउल विज्ञापनहरूको कारण थप २.$ मिलियन डलर उत्पन्न गरिरहेका छन्।
मार्केटरहरूले सोच्न रोक्नु पर्छ कि मार्केटिंग रचनात्मक हुनु पर्छ। यो सामान र सेवाहरू बेच्न छ। कहिलेकाँही कम्तिमा रचनात्मक मार्केटिंग सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
MSCO का सीईओ
त्यहाँ एक 'शैली' छ कि सुपरबोबल विज्ञापन को लागी आशा गरीन्छ, यद्यपि हास्य पक्कै पनि एक अपेक्षा हो। साथै, कमेडीले ब्रान्डि inमा मद्दत गर्दछ ... तपाईं गम्भीर व्यक्तिहरू भन्दा अधिक हास्यास्पद विज्ञापनहरू सम्झनुहुन्छ। यस पोष्टमा मेरो कुरा भनेको केररबुल्डरले पैसा लगानी गर्‍यो, केही हिटहरू बनायो, र त्यसपछि यो सबै बाहिर फ्याँकियो भाइरल मार्केटिंगलाई नबढ्याएर। यो लाज हो।
म सहमत छु कि पैसा अझ बढी खर्च गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ सुपरबोल विज्ञापनहरू निश्चित रूप से जुवा हो ... GoDaddy गत वर्ष जुवा खेले र जित्यो। यस बर्ष म शर्त गर्न तयार हुन्छु कि विज्ञापनले अपेक्षित प्रभाव पार्दैन। एक सुपरबोयल विज्ञापन मान्छेहरू पाउन सक्छन् - तर केवल तपाईं तिनीहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। थोरै बढी लगानी र रचनात्मकताको समीकरणको पक्षमा राख्दा अझ राम्रो प्रतिफल हुनेछ!
दुबै पढाइ र टिप्पणीको लागि धन्यवाद!
कमसेकम तिनीहरूले यूट्यूबमा पोष्ट गरे। त्यसोभए तिनीहरूले तपाइँलाई सम्पूर्ण भिडियो इम्बेड गर्न दिदैनन्, तर उनीहरूले के गरे कति खराब छ? तपाईंले अझै भिडियो पोस्ट गर्नुभयो।
म पक्का छु कि यसको पछाडि व्यवस्थापन तर्क यो हो कि उनीहरूले एउटा केन्द्रीय ठाउँमा टिप्पणीहरू देख्न सक्नेछन्।
म तपाईं किन यूट्यूबमा पोस्ट गर्न चाहान्छु भनेर सोच्न सक्दिन, व्यक्तिले यसलाई लिंक गर्न दिनुहोस्, तर मानिसहरूलाई यूट्यूबमा हेर्नका लागि फिर्ता जान बाध्य पार्नुहोस्।
म निश्चित छु कि उनीहरूको तर्क के थियो। त्यहाँ वास्तवमै तिनीहरूको साइटमा कुनै एम्बेड कोड थिएन जुन… मैले सन्निविष्ट स्ट्रि hack ह्याक गर्ने प्रयास गरें र तपाईंले माथि जे देख्नुभयो त्यो प्राप्त भयो। यो केवल धेरै खराब छ - तिनीहरूले यूट्यूब र सोशल नेटवर्कि ofको उद्देश्यलाई हराइरहेका छन्।